Safal Khabar - वर्षा नहुँदा तराईमा खडेरी, किसानलाई वेवास्ता गरी प्रदेश सरकार साइकल वितरण गर्नै व्यस्त
वर्षा नहुँदा तराईमा खडेरी, किसानलाई वेवास्ता गरी प्रदेश सरकार साइकल वितरण गर्नै व्यस्त
बिहिबार, २६ भदौ २०७६, १७ : ३८
धनुषा । प्रदेश सरकारको ‘हात हातमा जागिर र खेत खेतमा पानी’ भन्ने नारा ! नारामै सीमित हुने आशंका सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । अहिले किसानको घाउमा मलहम लगाउने समयमा प्रदेश सरकार साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छ । लामो समयदेखि तराईका आठ जिल्लामा वर्षा हुन नसक्दा खडेरीको सम्भावना बढेर गएको सम्बद्ध किसान बताउँछन् ।
समयमा वर्षा नहँुदा तथा सिँचाइको अभावमा अधिकांश जिल्लामा धान रोपाइँमा असर परेको छ भने रोपिएका धान पानीको अभावमा सुक्न थालेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ६४ हजार ६०० हेक्टरमा धानखेती हँुदै आएकामा करीब २५ हजार हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र रहेको र बाँकी असिञ्चित क्षेत्र रहेको छ ।
कमला सिँचाइ, हर्दिनाथ सिँचाइ, बालगङ्गा सिँचाइलगायत सिँचाइ आयोजनाबाट १२ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ हुने गरेको उक्त केन्द्रले जनाएको छ । लामो समयदेखि तराई–मधेश क्षेत्रमा वर्षा नहुँदा लहलहाउँदो धान अहिले सुक्न थालेको छ । वर्षात्का बेला बाढी पसेको मौकामा रोपाइँ गरेका कृषक लामो समयसम्म पानी नपरेर धान सुक्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन् ।
बाढीको बेला खेतमा लगाइएको धानखेत अहिले पानी नपर्दा चिराचिरा परेको उनीहरूले बताए् । बटेश्वर गाउँपालिका– ५ शान्तिपुरका किसान महेश यादवले पानी नपर्दा एक बिघा जमीनमा लगाएको धान सुक्न थालेको छ भन्नुभयो । उहाँले जोड दिनुभयो, “लामो समयदेखि पानी नपर्दा मोटरबाट पानी लगाउने गरेका छौँ, सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा कल (ट्युबवेल) बाट खेतमा पानी लगाउँदै आएका छौँ तर त्यसले केही धान्दैन ।”
मिथिला नगरपालिकाका युवा नेता सोमप्रसाद शर्माले लामो समयदेखि वर्षा नहुँदा किसानले लगाएको धान सुक्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिँचाइ सुविधा छैन, तर अहिले धानमा पर्याप्त पानी जम्नुपर्ने बेला हो ।”
क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तथा कृषक जगदीश यादवले समयमा पानी नपरेर किसानले खेतमा लगाएको धानबाली सखाप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामदेव यादवले ‘पम्पसेटबाट जसोतसो खेतमा पानी लगाउँदै आइएको छ तर यसबाट लगाइएको पानी खेतमा लामो समयसम्म नटिक्ने र पानी अभावले गर्दा धान उत्पादनमा कमी आउने गुनासो गर्नुभयो ।
लामो समयदेखि पानी नपरेर धानखेत चिराचिरा पर्न थालेपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लालकिशोर साहले सिँचाइको सुविधाका लागि पहल थाल्नुभएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– २१ लोहनामा सिँचाइका लागि वर्षौं पहिले गाडिएका १२ इञ्चका दुई वटा डिप बोरिङबाट लोहना र देवडिहामा तत्काल सिँचाइ सुविधा पु¥याउने तयारी थालिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले किसानको खेतमा डिप बोरिङको पानी पु¥याउन रु पाँच लाख पेस्की निकालेर डिप बोरिङ मर्मत सुधार र कुलो निर्माणको काम शुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश २ को कृषि निर्देशनालयका निर्देशक ओमप्रकाश विराजीले प्रदेश २ को १३६ स्थानीय तहमा पाँच लाख ४७ हजार २२६ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेकामा पछिल्लो केही वर्षयता खेती गर्ने क्रम घट्दै गएर अहिले पाँच लाख २६ हजार ६५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती हुँदै आएको बताउनुभयो ।
खेतीयोग्य जग्गा पाँच लाख २६ हजार हेक्टर भए पनि प्रदेशको सिञ्चित क्षेत्रफल एक लाख १५ हजार ५१५ हेक्टर मात्रै छ । यसपटक आठ जिल्लामा ४५० थान स्यालो ट्युबवेल वितरण गरिएकाले आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नेलाई पनि सिँचाइका लागि केही सहज हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
निर्देशक विराजीले कमला र वाग्मती डाइभर्सन नबनेसम्म प्रदेश २ का खेतीयोग्य जग्गामा खेती गर्न सधैँ समस्या रहने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रममा सुनकोशी–कमला डाइभर्सन प्रोजेक्ट, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग पहल गरिने जनाएको छ ।
सञ्चालित सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत नारायणी सिँचाइ योजना, वाग्मती सिँचाइ योजना, कमला सिँचाइ योजना र कोशी सिँचाइ योजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले जिल्लामा रहेका नदीनालामा बाँध बनाई कुलो पइनीमार्फत सिँचाइको प्रबन्ध गरिर्ने बताउनुभयो । (रासस)
६. खुमलटारमा सकियो प्रधानमन्त्री ओली बाहेक नेकपा शीर्ष नेताको छलफल
७. गोकुल प्रकरणः ओली र प्रचण्डबीच चर्काचर्की